Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo izahay fotoan-tsarobidy, ny fahasoavan’ny Tompo anie hoaminareo mandrakariva.
Ny lohahevitra hoentina amintsika eto indray ry havana dia ny hoe «ny tokantrano miorina miaraka amin’Andriamanitra ».
Ankehitriny mantsy ry havana dia maro ireo tokantrano, tsy naorina teo imason’Andriamanitra dia ny fanamasinana azy teo amin’ny alitara izany., misy antony maromaro mety mahatonga izany, eo ohatra ny tsy fananana ny hoentimanana, ao ny efa manana zaza ka tsy afaka ny hiroso, ao koa anefa ireo milaza hoe mbola ho hita eo e! Izany ry havana dia tsy sitrapon’Andriamanitra. Ny tokantrano maso mantsy dia naman’ny fijangajangana izany eo imason’Andriamanitra. Indrindra fa ankehitriny ireo tanora no tafalatsaka amin’izany. Ny fanaovana firaisana ara-nofo alohan’ny fanambadiana dia naman’ny mijangajanga ihany koa. Nefa maro ireo efa tafalatsaka amin’izany. Ny fanehoana fitiavana ry havana dia tsy amin’ny alalan’ny fanaovana firaisana, izany mantsy no ataon’ny tanora maro ankehitriny vao miaraka kely dia izany no ao an-tsaina. Diso hevitra isika noho izany. Andriamanitra dia fitiavana ary fitiavana madio no ilainy amintsika, sarotiny ny Tompo ny amin’ny tenantsika satria tempolin’Andriamanitra isika. “tsarovy fa tempolin’Andriamanitra ny tenanareo". Tsarovy ry havana fa tia anao mandrakariva ny Tompo, tsy mbola tara ianao raha miverina aminy. Koa amin’izao sisa izao dia miorena ary manatona azy, ary hoy ny Tompo hoe: « mba tsy handaniantsika ny andro sisa iainantsika amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra " I Petera 4 : 1-2.
Fanomezan’Andriamanitra ny vady, “hanaovako vady sahaza ho azy izy” GENESISY 2,18, efa nomen’Andriamanitra anao io vadinao io, Izy no nanolotra azy; ka rariny raha toa ka entina eo aminy izany mba ho tsofiny rano, sy hanomezana voninahitra Azy. Tsy haingitraingitra akory ry havana ny fanaovana “mariage“ na ny “fanamasinana ny fanambadiana”, fa sitrak’Andriamanitra tokoa izany; satria nandray andraikitra Andriamanitra teo amin’ny fiainanao ka nanolorany ilay vady sahaza hoanao. Rehefa voatso-dranon’Andriamanitra mantsy ny tokantranonanao dia mahita ny fiadana sy filaminan-tsaina mandrakariva ary anjakan’ny fitiavana, satria ilay efa nekenao ho Tompo sy mpamonjinao dia “Fitiavana”. Andriamanitra dia Fitiavana. Inona moa no atao hoe : “fitiavana”, Raha rasaina ny teny hoe “fitiavana” dia hoe: “fi-tia-havana”.
Ny teny hoe: “fi” dia tsara, matsiro, ankafizina,...; ny teny hoe: “tia” na “amour” indray dia Andriamanitra satria izy ilay tena “amour”. Ary ny teny hoe: “havana” dia ankohonana na ny tokantrano. Noho izany dia tsara Adriamanitra mihitsy aloha no hanorenana ny tonkatranonao, fa tsy ny fahotana na amin’ny fijangajangana no anorenana azy, araka ny voalazan’ny tenin’Andriamanitra araka ny Genesisy voalaza tetsy ambony teo.
Isika mantsy ry havana dia samy miaiky fa avy amin’Andriamanitra tokoa ny vady, satria Izy mihitsy no nilaza fa “tsy tsara raha irery ralehilahy” araka ny voalaza ao amin’ny GENESISY 2,18. Koa eo ary no mampieritreritra antsika ary misarika ny saintsika ihany koa hoe tena tianao tokoa va ny vadinao? Tena sitraponao tokoa va no nanekenao ny vadinao? Tsy noterena ihany koa va ianao nanambady azy? Izany no fanotaniana atao raha toa ka tonga eo amin’ny fanamasinana ny olon-droa hifanaiky. Marina tokoa izany satria efa nifanaiky ianareo teo amin’ny maha olombelona fa himafo sy hivady, araka ny tenin’Andriamanitra ao amin'ny Hosea 2:21” Ary hofofoiko ho vadiko mandrakizay ianao, eny, hofofoiko ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao”, sy ny ao amin'i Marka 10:8 "ary ho nofo iray izy roroa"(Gen.2.24); ka dia tsy ho roa intsony izy, fa ho nofo iray ihany". tsara tokoa izany teny izany nefa mila fanetrentena sy fitiavana tokoa ary fanarahana ny tenin’Andriamanitra sy ny didiny. Raha manaraka antsakany sy andavany izany tenin’Andriamanitra izany isika ry havana dia ho hitantsika ny voninahitr’Andriamanitra. Koa aoka ary hifanaja mandrakariva ny mpivady araka ny tenin’Andramanitra ao amin'ny Matio 19:5 "Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany izy roroa ", sy ny hoe: “hianareo vehivavy maneke ny vadinareo,.......” tsy ny vehivavy ihany eny fa na dia ny lehilahy koa aza. Matetika mantsy dia eo no mahatonga ny fifandirana sy ny ady ao an-tokantrano satria, amin’izao fotoana izao ny vehivavy mitady hitovy zo amin’ny lehilahy. Nefa hoy ny Tompo ao amin'ny Efesiana 5:23 "Fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka an'i Kristy koa Lohan'ny fiangonana; ary Izy no mpamonjy ny tena", izany akory tsy midika fa mahazo manao izay tiany hatao ny lehilahy satria masi-mandidy ao amin’ny tokantrano izy. Nefa tsarovy ry havana fa mbola misy ilay mpandidy sy mpanapaka ny fiainanao dia Andriamanitra izany. Izy irery ihany no masi-mandidy ao antokantranonao, tsy misy afaka manao izany fa ianao dia fitaovana ihany; koa meteza ary ho mpiara-miasa amin’ny Tompo ianao. Misy koa mantsy ny tokantrano sasany dia ny olona hafa indray koa no manjaka ao amin’ny tokantranony, ohatra ny fianakaviana avy amin’ny lahy na ny avy amin’ny vavy. Izany koa anefa dia mety maharava ny tokantrano satria tsy ilay tena Mpanjaka no monina ao sy tena ampanjakaina ao, hany ka lasa mikorontana ny tokantrano. Satria tsy ilay andrian’ny fiadanana no manjaka ao, koa angataho mandrakariva ry havana ny Fanahy Masina sy Jesosy mba honina ao amin’ny tokantranonao, ka hamono sy handrava ny asan’ny satana ka tsy hahatamana azy ireo intsony ao antokantranonao. Sambatra ianao zay mitoky amin’ny Jehovah. Koa ataovy ary izany dia hohitanao ny voninahitr’Andriamanitra.
Hafatra hoan’ny tanora, tsara isika mahalala bebekokoa ny tenin’Andriamanitra, mba hahafantarantsika ny lalana mankany amin’ny fahamarinana, sy ilay tena fiainana dia Jesosy Kristy Tompo, raiso Izy ho ao anatinao mandrakariva. Aza avela izany fa ataovy ao am-po, ao an-tsaina mandrakariva, ITimoty 4:12 "Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino hianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana". Koa mahereza rahalahy mahereza, mahereza rahavavy amin’ny fanarahana ny Tompontsika. Ary aoka hitombo mandrakariva eo amin’ny fanarahana an’Andriamanitra, fa isika tsy naman’izay mihemotra. Matetika mantsy ny tanora no alaim-panahy hanaonao foana eo amin’ny fiainana, nefa rehefa miaraka amin’Andriamanitra dia afaka mandinika sy mamakafaka tsara ny fianana, ka mahita ny làlana hombàna, ary raha mahay mihaino ny sitrapon’Andriamanitra isika, mahay mihaino ny feony dia ho azontsika ilay vallim-pitia lehibe. Ny devoly mantsy dia tsy tery lalana eo amin’ny fiainantsika ry havana, satria mitady lalana mandrakariva izy izay hahatafidirana ao aminao na ny tokantranonao. Koa meteza mandrakariva ary mba ho ao amin’ny Tompo ianao. "Ambeno ny manda, Tazano ny lalana, Hatanjaho ny valahanao, Hetseho mafy ny herinao!" Nahoma 2:2.
"Miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadia ny ady tsaran'ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay; fa amin'izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro" (1 Tm 6,11-12)
"Aoka tsy hisy hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana" (1 Tm 4,12).
Ny mpitondra hafatra R. Roger
Isaia 27:3 "Izaho Jehovah no mpiaro io; isaky ny indray mipi-maso no andemako azy, Fandrao misy manimba azy; Na andro na alina dia miaro azy."
Dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo indray ry havana. Ny fahasoavany anie hirotsaka mandrakariva amintsika, sy ny fiadanany.
Eto ny Tompo dia manambara ny maha mpiaro ny tokantrano tsirairay avy, indrindra fa ny tokantrano izay miorina ka naorina teo amin'ny vatolampin'ny fiainana, dia ramin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tsy mahafaly an'Andriamanitra ry havana ny hampahory antsika, ny hijalian'ny tokantrano tsirairay avy, fa sambatra tokoa ny tokantrano miankina amin'ny herin'ny avo indrindra. Maro ireo tokantrano efa nandalo teto amin'ny fotoantsarobidy teto amin'ny fiangonana FPVM FIOMBONANA TSARAHONENANA, maro izy ireo samy manana ny olana maro samihafa, nefa rehefa nentina teo anatrehan'i Jesosy ilay Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika Kristianina, dia nahazo valim-bavaka, ary tian'Andriamanitra ihany koa ny tokantrano tsirairay avy mba hiorina tanteraka amin'ny teniny sy hanaraka ny làlany.
Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eny am-piandohana dia sambatra tokoa ny trano itoerany, manana fiadanam-po, fiadanan-tsaina, manana fiainam-panahy, mendrika sy masina indrindra. maro ireo nanana olana hoy aho, ary efa maro koa ny nijoro vavolombelona ny amin'ny nahazoany famonjena, ary ny fikambana fotoan-tsarobidy dia tsy manavaka antokom-pinona na avy aiza na avy aiza. Afaka manantona ny fikambanana ao amin'ny FPVM TSARAHONENANANA hianao izay mila fanasitranana, fa miandry anao Jesosy, tsy ny anaram-piangonnana akory no hotoriana fa ny voninahitr'Andriamanitra, ny fiadanana izay homeny olony. Manana vatolampy iankinana tokoa isika, raha ny fiainana mantsy ry havana no tsy miankina amin'Andriamanitra dia zava-poana ihany izany. Koa ankino amin'ny Tompo ary ny fiainanao, araka ilay hira iray izay manao hoe: "Fa raha izao fiainana izao, no tsy miankina minao, dia ho zava-poana ihany Tompo ny tsy miankina amin-dRay", ny tokantrano dia toeram-pamolavolana olona iray mba hanana ny fianany manokana, ary ny mikolokolo azy mba hana fiainam-pahasambarana, araka ny hita ao amin'ny Deoteronomia 33:29 "sambatra hianao, ry Isiraely; Iza no tahaka anao, ry olona voavonjin'i Jehovah, Ampingan'ny famonjena anao sy sabatry ny voninahitrao! Hikoy anao ny fahavalonao. Ary hianao handia ny fitoerany avo." Ny vahoaka Israely moa ry havana no atao hoe vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, ary ny tokantrano miankina tanteraka amin'Andriamanitra dia ho tahaka izany koa, satria manana ilay fiadiana mahery dia Jesosy Kristy izany; io no ampinga enti-miady amin'ny fianana ka hoenti-mandresy ny fahavalo. Fa isika izao dia miady amin'ny fanahy fa tsy nofo, satria ny fahavalontsika dia satana ilay fahavalo eny amin'ny rivotra. ka mila miaro ny tenantsika isika amin'izany, mila miabina mandrakariva amin'ny fiainana; ka ny milona am-bavaka mandrakariva no atao amin'izany, izany hoe: na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia mila miresaka mandrakariva amin'Andriamanitra isika mba tsy hoazon'ny fakam-panahy. Ka hanomezany hery sy tanjaka mandrakariva. Koa herezo Tompoko fa ny Tompo tsy mba mandao sy tsy manary anao. Tsy mandao izy fa eo akaikinao mandrakariva.
Tia anao ny Tompo, te hamonjy anao Izy, ny tonkantrano no mirindra mantsy dia ny fampanjakana an'Andriamanitra amin'ny fiainana. Ny fiainana amin'izao fotoana izao mantsy dia anjakan'ny fitiavan-tena, tsy mijery ny hafa intsony, hany ka latsaka ao anatin'ny fahotana ny olona. Misy mantsy ny tokantrano ry havana tsy misy intsony ny fifandraisan'ny mpivady, ny fifanakalozan-kevitra, fa efa repotry ny fiainana. Tokony mba hisy fotoana eny fa na dia kely ihany ihany aza mba hifampiresahan'ny mpivady. Mahafinaritra anie ny mahita mpivady mifankatia e! Ary izany no tena tian'ny Tompo hoamintsika, faly ihany koa Izy mahita izany satria Izy dia Fitiavana. Na misy aza ny tsy fifankahazoana kely dia aoka hanjaka ao anatinao ny fanana fandeferana. Raha sendra misy ny fifamaliana ao antokantrano ao, na fifamaliana izany dia roahy amin'ny anaran'i Jesosy ny devolin'ny fahatezerana fa aza ny vadinao no roahina. Na mandehana misitaka kely aloha, maka saina tsara dia miverena amin'izay avy eo. Sambatra izay mahay mifankatia sy mifamela heloka. Mifona mandrakariva raha misy nahatezitra ny iray. Ianareo mivady tia tena iray ihany eo amin'Andriamanitra, araka ny teniny hoe "ho nofo iray ihany izy roroa". Efa tena iray ianareo, efa nakamban'Andriamanitra; moa tianao va ny tenanao? Tiavo tahaka izany koa ary ny vadianao. Efa nomen'Andriamanitra anao io dia kolokoloy tsara, hajao tsara.
Ny mason'Andriamanitra ry havana dia mijery anareo mandrakariva, mahaiza mifandefitra, mahaiza mifankatia, miverena amin'ilay fitiavana voalohany, hoatr'ireny vao nifamofo ireny hianareo; enga nie ny fitiavanareo "ho tahaka ny garanadrela ka mikentrona vao mihamamy". Izany no firariantsoa atolotray hoanao sy ny ankohonanao. Misy mantsy ny olona mahita ny "akanga tsara soratra, ka manary ny akoho taman-trano" araka ny tenin'ny Ntaolo. Ary ny Tompo dia milaza fa "mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo". Ny fiviliana amin'ny lalan-diso dia tsy sitrak'Andriamanitra. Koa meteza hamboarin'ny Tompo ianao, atolory azy ny fonao, ekeo ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao anie Izy ka feno fifaliana sy fiadanana mandrakariva.
Ny fahasoavana amam-piadanany anie hoaminareo mandrakariva.
Ny Fikambanana fotoan-tsarobidy dia faly mirahaba anao amin'ny anaran'ny Tompo, ny fahasoavana amam-piadanany anie hoaminareo mandrakariva.
Ny Fikambanana fotoan-tsarobidy dia mikarakara ireo olona manana olana ara-tokatrano, toy ny fisaraham-bady, ny zanaka maditra, ny vady maditra, sy ireo karazana olana maro samihafa rehetra, izany famahana izany olana rehetra izany dia miainga ao amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa.
Maro ireo olana efa voavaha ary efa maro koa ireo olona no efa nijoro vavolombelona tamin'izany. Anisan'izany vehivavy iray izay tsy nanam-bady nefa izy efa tokony hanana tokantrano amin'izay, nentina teo anatrehan'ny Tompo izany dia tanteraka soamantsara. Nahita izay sahaza hoazy Izy, nomen'Andriamanitra azy izany rehefa niova fo sy nanaraka ny didin'Andriamanitra sy ny teniny izay nomena azy.
Manaraka izany, misy koa renim-pianakaviana iray, izay efa nisara-panambadiana efa nandritry ny taona maro, ary efa nanambady olona hafa mihitsy aza ilay vadiny, nomena azy ny tenin'Andriamanitra, araka ilay voalaza hoe:"izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahan'olombelona". Natao ny vavaka sy ny fandinihan-tena rehetra, ary lasa Izy nakany amin'ilay vadiny izay efa nanambady olona hafa, ny zavatra natao tamin'izany dia ny fifonana taminy raha toa ka nisy zavatra nampalahelo azy tao anatin'ny tokan-trano; zay nisy azy teo aloha. Rehefa vita izay dia niangavy ny handry ao amin'izy ireo izy ny alina satria lavitra moa ny toerana. Tsy nahazo fandriana na efitra moa izy fa dia tany an-dakozia no nampatorian'izy roa. Teo dia nanomboka nivavaka izy, ary nanomboka ihany koa ny fanadiovana ireo fitaovana rehetra tao an-dakozia iray manontolo, rehefa vita izany rehetra izany; izay vao natory izy. Ary rehefa nony maraina ny andro dia gaga ilay rangahy fa nadio avokoa ny fiataovana rehetra ary nilamina tsara izany, hany ka tapak'evitra ny lehilahy fa hanaraka ny vadiny hiverina hiakatra aty Tana. Izany ry havana no herin'ny vavaka sy ny finoana an'Andriamanitra, ilay mahefa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana, na inona na inona zava-miseho dia tokony hampanjakana hatrany ilay be fitiavana, ilay andrian'ny fiadanana. Indrindra fa amin'izao fotoana fahatsiarovana ny nahaterahan'ny Tompo izao, aoka koa ho teraka ao ampontsika Izy ka hanjaka ao.
Ny fotoana amin'izany dia isaky ny Talata amin'ny 2ora sy ny zoma amin'ny 2ora ihany koa.
Koa ny fahasoavany anie hoaminareo mandrakariva ary mahereza mivavaka sy mampanjaka llay be voninahitra ao ampontsika mandrakariva.
Mpanoratra mpitondra teny: RANDRIANANDRASANA Roger
1. RAJAONARIVELO Nivomalala | 13/04/2011
Mba mangataka fitrotrona ambavaka fa mikorotana be ny tokantrano, vady maditra tsy manome vola ara-dalàna, ny tenako miasa nefa tsy mba misy ho fikarakarako vatana fa de lany trosa.
Tena ao anatin'ny fahadisompanantenana mafy aho ary mangataka fitrotrona ambavaka, ampio aho hitady ny voninahitr'Andriamanitra mba haneho fahagagana amin'ny fiainanay minakavy kely izy mba ho endry.
Manantena valiny haingana.